Baarlamaanka oo kalsoonida siiyay wasiirka arrimaha gudaha. – idalenews.com
Baarlamaanka oo kalsoonida siiyay wasiirka arrimaha gudaha.
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonid asii yaya wasiirka arimaha gudaha C/llaahi Goodax Bare oo ay mooshin laga keenay.
144 mudane oo ku sugnaa xarunta baarlamaanka 115 ka mid ah waxa ay codka kalsoonida siiyeen wasiirka halka 18 ay diidday waxaana ka aamusay 11 mudane, siddaas waxaa sheegay markii cod bixinta ay dhacday afhayeenka baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Wasiirka oo hadlay inta aan codbixinta dhicin ayaa xildhibaannada ka codsaday inay codka kalsoonida siiyaan, wuxuuna markii dambe oo uu hadana hadlay sheegay in uu wax ka badali doono dhammaan eedeeha loo soo jeediyay oo ah in uu si qalad ah u magacaabay guddoomiyaaal degmo.
Horrey wasiirka waxaa mooshin uga keenay ilaa 60 mudane kuwaasoo ku dooddayay in uu wasiirka ku fashilmay magacaabista degmooyinka iyo gobalada laga saaray Shabaab.
Baarlamaanka ayaa maalmahan la xisaabtan ku wadey xubno ka mid ah wasiirrada xukuumadda oo ay ku sheegen inay shaqadooda hooseyso,waxaana ay sheegen xildhibaannadu inay ku dadaallayan sidii ay xukuumaddu u noqon lahaayd mid shaqadeeda ka soo baxda.
DEG DEG: Shir Albaabada u Xiran Yihiin oo Hada Baydhabo Uga Socda Wasiir C/fitaax Geesay Iyo Gudoomiyaha Gobolka Gedo Maxamed Kaliil.